vendredi, 09 juin 2017 22:43
Kidnapping Pradeep Chandarana à Behoririka
vendredi, 09 juin 2017 22:05
Tribunal Anosy: 2ème jour de grève
Les Magistrats, dans tout Madagascar, ont suivi l'appel du Syndicat des Magistrats de Madagascar de débrayer pendant 48h pour contester l'immixtion de l'Exécutif dans les affaires judiciaires.
Le SMM dénonce, entre autres l'affaire Revahana Michel, l'affaire Claudine Razaimamonjy, l'affaire du Maire d'Ampanihy.
vendredi, 09 juin 2017 22:02
Ambalavola Mahajanga: Tranona teratany karana levon'ny afo
Tapaporohana sy lavenona sisa no novantanin'ireo tompo-trano avy nivavaka ny alarobia alina tokony ho tamin'ny sivy. Trano iray ana teratany karana ity may teny amin'ny Fokontany Ambalavola ity.
Trano misy efitra efatra, tsy hay izay niandohan'ny afo fa ny afo efa nijoalajoala sy setroka nanempotra no hitan'ny manodidina ka nanaitra azy ireo.
Tsy nisy afatsy ny akanjo teny an-koditra sisa azon'izy telo mianaka noraisina.
Raha ny tranga tamin'ny alarobia 07 jona dia tara vao tonga ny mpamonjy voina noho ny olana tamin'ny resaka rano raha ny fanazavana.
vendredi, 09 juin 2017 21:02
Mahajanga : Noraofina ny latabatr'ireo mpivarotra tsy manara-dalàna
Nanao be midina ny tompon'andraikitry ny Kaominina, notarihin'ny lefitra fahatelon'ny Ben'ny Tanàna, Andrianasy Fanjanirivo, niaraka tamin'ny Polisy monisipaly ary ny fiara vaventy. Noraofina avokoa, omaly maraina alakamisy 08 jona, ireo latabatra sy seza teny ambony trottoir, fampiasan'ireo mpivarotra isan-kariva.
Nanazava ny lefitry ny Ben'ny Tanàna fa efa nisy ny didim-pitondrana nivoaka manala ireo mpivarotra ireo ary efa nisy ny fampahafantarana izany sy ny fifampiresahana tamin'ny roa tonta.
vendredi, 09 juin 2017 16:39
Fianarantsoa: Mampiantrano ny masoivohon'i Afrika Atsimo
Nitafa sy nidinika tamin'ny mpandraharaha teto Fianarantsoa ramatoa Maud Vuyelwa Dlomo ny tontolo andron'ny alakamisy 8 jona 2017.
Mialoha ny fety fankalazana ny faha-40 taonan'ny Oniversiten'i Fianarantsoa izany fihaonana izany.
Fantatra nandritra ny firesahana tamin'ny mpisehatra ara-pizahantany ireo vina fiaraha-miasa sy fifanankalozana amin'ny lafiny fanofanana fandraisam-bahiny. Natsidika ny fifanojoan'ny paikady fampahafantarana ny tanàna ifotony sy ny tontolo ambanivohitra amin'ny resaka fomba amam-panao nentim-pahazarana.
Hisy ankoatr'izay ny vina maharitra miaraka amin'ny mpandraharaha eto an-toerana araky ny drafitra fampandrosoana misy eto amin'ny faritra.
vendredi, 09 juin 2017 16:15
Mahavelona Foulpointe: Nidoboka am-ponja ilay Ben’ny Tanàna HVM
Miandry fitsarana ao Ambalatavoahangy nanomboka ny alarobia hariva 07 jona ny Ben’ny Tanànan’i Mahavelona Foulpointe sy ny lefiny voalohany ary ity mpiasa teo aloha teo anivon’ny Birao Ifotony ny Fananan-tany (BIF).
Fampiasana hosoka sy fanaovana izany tamin’ny famarotana ny ampahan-tanin’ny EPP iray ao an-toerana no nitarika izao fitazonana am-ponja azy ireo izao, taorian’ny fitoriana nataon’ireo mpanolontsain’ny Tanànan’i Mahavelona Foulpointe, teo anivon’ny Bianco Toamasina.
vendredi, 09 juin 2017 16:03
Mahajanga : Namoa-doza indray ny Bajaj
Omaly hariva tamin'ny 5 ora sy sasany, Bajaj iray no potika rehefa nitrongy fiara nijanona teo amin'ny sisin-dalana nanoloana ny sekoly Notre Dame.
Potika tanteraka ilay Bajaj, raha ny tao aorian'ilay fiara kosa no nisy pempo. Raha ny tsikaritra, mamo ny mpamilin’ilay Bajaj ka izay no nahatonga ny loza.
Efa tsy nitondra mpandeha ity farany raha mbola nisy mpianatra kosa ilay fiara nodominy. Tsy nisy ny naratra tao anatin'ilay fiara fa ilay mpamily mamo kosa no vaky loha.
vendredi, 09 juin 2017 15:17
Foara iraisam-pirenena ho an'ny fizahan-tany eto Madagasikara
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy omaly 08 jona ny Interational Tourism Madagascar na ny Foara iraisam-pirenena ho an’ny fizahan-tany eto Madagasikara, izay natao tetsy amin’ny Village Andohatapenaka .
Izany moa dia hifarana ny alahady 11 jona ho avy izao, izay misokatra ho an’ny olona rehetra tsy ankanavaka. Misy ny vidim-pidirana 5000 Ariary .
Maro ireo trano eva misy eny an-toerana. Marihina moa fa dia nisongadina tamin’izany ny kolontsaina sinoa izay nasaina manokana tamin'ity andiany ity.
vendredi, 09 juin 2017 14:16